ရန်ကုန်သားတာတေ| December 29, 2012 | Hits:9,915
7 | | ၂၀၁၂ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို ကူးတော့မယ်။ ကိုတာတေတို့ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အသားကျဖို့ ဘက်စုံ ထောင့်စုံက ကြိုးစားရင်း နှစ်သစ်ကို ကြိုကြတော့မှာ အသေအချာပဲ။
ဦးရုက္ခစိုးနှင့် ယဉ်ကျေးပျူငှာ ရွှေမြန်မာ
အမတ်မင်း အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှင့် စကားပြောဖြစ်ခြင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပေါက်စောင့် ရှိနေမယ်
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Andrew Kham December 29, 2012 - 7:59 pm	Very funny and fantastic. Ko Tar Tay is so smart and wise.